Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Chicken Burgers nke Longo chetara ugbu a
Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! • News
Belmont Meat Products Ltd. na-echeta akara Longo Chicken Burgers n'ahịa n'ihi na ọ nwere ike ịnwe akwa nke ekwuputaghị na label. Ndị nwere ihe nfụkasị ahụ na akwa ekwesịghị iri ngwaahịa echetara nke akọwara n'okpuru.
E rerela ngwaahịa ndị a na Ontario.
Longo si Burgers ọkụkọ 852g (6 x 142 g) 7 72468 03418 6 Kasị Mma Tupu 2022 MR 09 2022 MA 13 2022 JN 28
Ọ bụrụ na ị nwere ihe nfụkasị ahụ na akwa, erila ngwaahịa echetara n'ihi na ọ nwere ike ibute mmeghachi omume dị egwu ma ọ bụ na-eyi ndụ egwu.
Ihe nchoputa nyocha nke Canada Food Inspection Agency (CFIA) kpalitere ncheta a. CFIA na-eme nyocha nchekwa nri, nke nwere ike ibute icheta ngwaahịa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na echetara ngwaahịa ndị ọzọ nwere nnukwu ihe egwu, CFIA ga-eme ka ọha na eze mara site na ịdọ aka ná ntị ncheta nri emelitere.
Mmeghachi omume Enwebeghị mmeghachi omume ọ bụla metụtara oriri nke p